Wadahadalka Nabada ee Dhexmaray Dawlada Itobiya iyo Jwxo oo Dirba Laga Dareemay Dhulka Somalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Jun 18, 2010 Wadahadalka Nabada ee Dhexmaray Dawlada Itobiya iyo Jwxo oo Dirba Laga Dareemay Dhulka Somalida Ogadeeniya.
Muddo ka yar todobaad ayey ahayd kolkii uu wadahadal bilow ah ku dhexmaray Jabhada wadaniga xoraynta Ogadeeniya [jwxo] iyo dawlada Itobiya, waxaana soo baxaya ifafaale dabayl nabadeed oo laga dareemayo ama ay dadkuba hadal hayaan dhamaan gabalada Ismaamulka Somalida.
Sheekh Ibraahin Xuseen oo hogaamiya Jxsg oo ay jabhadiisu dhawaan qaadatay heshiis nabadeed ayaa xili la waraysanayey yidhi “nabada aan qaadanay dadkanagu way u oomanaayeen, kolkii aanu ku dhawaaqnay in aanu heshiis qaadanayno ayaa waxaa hal mar ooda soo jabsaday dadweynihii oo noogaba horeeyey dalka” “waxaa moodaysay sidii dad xabsi xoog kaga soo baxsaday oo kale”.
Waxaa dhab ah in hadalka Sheekh Ibrahin Xuseen uu yahay hadal dhab, waxaanan u ahayn markhaati in meel walba ay ka yimaadeen dadweyne u dhashay Somalida Ogadeeniya oo lagu khuukhin jiray hadaad tagtaan dalkii xabsi umbaa lagu galin, cid kalena ku galin mayso ee waxaa ku iibsan ruuxa dad kuugu xiga. Arintaas waa dhab in ay jirtay, laakiin waxaan hubaa in baryihii dambe ay noqotay siyaasad laga guuray.
Ururada ka dagaalama dhulka Somalida Ogadeeniya waxay kolkii hore ahaayeen hal fiqo, oo leh hal ujeedo dadna isugu jecel, ummada Somalida Ogadeeniyana sidaasi ayey ku jeclaayeen.
Waxaase dhab in wax walba oo aduunka jira uu lee yahay xili uu waxtar lee yahay iyo xili uu xumaado [life cycle]. Jwxo, waxay ka mid tahay waxyaalaha dunid yimid ee aan soo sheegnay, khaa,isaadeedana waxaa loogu magac daray Jwxo-shiil.
Heshiiska ay maanta la gaadhay Itobiyana waxay dantu ugu jirtaa Itobiya, ummada Somalida Ogadeeniya iyo xubnaha Jwxo ee jaako galka ah. Waa dhab in ay aad u xanuun badan tahay in dhalinyaro in badan duurka ku jiray oo mustaqbalkooda oo dhan seegay wixii ay ku seegeen hal mar la yidhaahdo qoryaha dhiga. Waxaase ka sii xanuun badan siyaasiga qaatay nabada taas oo uu u arkay in ay dantu ku jirto.
Waxaana labadoodaba ka sii xanuun badan dadweynaha dhul iyo dhaqashaba ka quustay ee dhoodi meerka ahaa sanooyin.
In uu heshiisku nabad yahay nabaduna macaan tahay nolol iyo wanaag yahay, waxaa adkaysan waayey oo sugi waayey dhamaystirka heshiiska Cwxo. Waxaa dhab in dharaar dhaw ay buux dhaafi doonaan magaalooyinka iyo goobaha ciidamada ciidamo tiro badan oo ahaa “macalin xagaa injirta lagama qabto”.
Waxaa cidla fadhiya oo aan cid iyo reer toona haynin calooshiis la ciyaar Jwxo-shiil. ummada Somalida Ogadeeniya nabad bay toonaysaa sida aad kor ku aragteen, siyaasigii nabad buu doormooday, ciidankiina waa kaa ciyoon soo xarooday isaga oo raacay amarka saxda ah.
Waxaa uun mudan in la dhamaystiro dhag xumana laga dhawro iyo wax dhaawici kara niyada cwxo, dadweynaha iyo ciidanka dawlada.